आधुनिक जीवन केही गर्ने पर्याप्त निद्रा प्राप्त गर्न सक्छन् कि यस्तो छ। दैनिक तनाव र सम्भावित लाभ को पछि लाग्नुलाई मा arising थकान, कारण निद्रामा disturbances। समय, दैनिक निद्रामा deprivation थकान र निद्रामा disturbances सामना गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ भन्ने तथ्यलाई तिर जान्छ। यस सन्दर्भमा मा, प्रश्न उठ्छन्: पर्याप्त निद्रा कसरी प्राप्त गर्न र सुत्न धेरै निद्रामा कसरी?
शोधकर्ताओं निद्रामा को स्थिर कमी र परिणामस्वरूप सो विकारहरु गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्छ भन्ने साबित भयो। तपाईं लगातार पर्याप्त निद्रा प्राप्त छैन भने, यो पूर्ण निद्रामा को लामो समयसम्म अभाव विकास गर्न सक्नुहुन्छ समग्र बुरा स्वास्थ्य र मुड र गम्भीर स्वास्थ्य समस्या हुन्छ।
त्यसैले, समस्या, सानो निद्रामा र निद्रामा रूपमा सान्दर्भिक छ भन्दा मानिसहरूलाई। निद्रामा अवधि व्यक्तिगत र हरेक उमेर र विशेष मा एक व्यक्ति लागि हो। त्यसैले, किशोर सक्नुहुन्छ ओछ्यानमा जाने मध्यरात पछि र ताजा र थकित छैन नै समयमा प्राप्त। पुरानो मान्छे पनि समय सुत्ने धेरै आवश्यक छैन। हामी पनि हामी सुतिरहेको खर्च समय सधैं आफ्नो गुणस्तर बराबर छ कि सम्झना गर्नुपर्छ।
आधुनिक मानिसलाई पर्याप्त निद्रा प्राप्त गर्न कसरी साधारण नियम र सुझावहरू परिभाषित गर्ने प्रयास गरौं। एक मुख्य नियम को - समय सुत्न जाने र तपाईंले मात्र पर्याप्त सुत्न, तर सक्रिय र कुनै पनि काम को लागि तयार हुनेछ। व्यक्तिगत निद्रामा को इच्छित अनुभूति ल्याउन क्रममा यो तपाईं को लागि लिन्छ समय आफैलाई लागि निर्धारण।
अझै पनि आफूलाई सोध्छन् गर्नेहरूका लागि, पर्याप्त निद्रा कसरी प्राप्त गर्न, सरल तर प्रभावकारी विधि ओछ्यानमा जानुअघि कोठा को अनिवार्य वेंटिलेशन छ। म पनि सो चरणहरु विभाजित छ सम्झाउने चाहनुहुन्छ: छिटो र ढिलो, जो को अवधि बारेमा 90 मिनेट छ। यो कि मान्छे अर्थात् जब यसलाई बन्द आउछ, चरण समयमा उठ छैन महत्त्वपूर्ण छ। पनि उठ्दै मा, मानव मस्तिष्क सक्रिय काम गर्न सुरु कि सजग हुनुहोस्। त्यसैले ओछ्यानमा luxuriate गर्न लामो समय को लागि बानी तोड्न राम्रो छ।
कसरी सुत्न सुत्न?
यो निद्रामा एक दिन घन्टा छैन कम7भन्दा गर्न आवश्यक छ कि विश्वास छ। तर ठूलो थुप्रै कि यो राम्रो वास्तवमा जानिन्छ मानिसहरू सुत्थ्यौं धेरै सानो, र तिनीहरूले एक उच्च दक्षता खुलिरहेको। उदाहरणका लागि, चर्चिल, एक दिन छ भन्दा कम घन्टा, सुतिरहेको नेपोलियन चार घण्टा सुत्थ्यौं। जबकि, उदाहरणका लागि, आइंस्टीन एक दिन कम्तिमा 12 घण्टा सुते!
स्वास्थ्य र प्रदर्शन कायम राख्न, पर्याप्त निद्रा प्राप्त त्यसैले निद्रामा कति तपाईं आवश्यक र कसरी? यो सबै तपाईं सुत्न कति मा छैन निर्भर र सुत्न छ दिन को के समय मा। विशेषज्ञहरु विश्वास सबैभन्दा लाभदायक निद्रामा कि - 19 22 घण्टा देखि। आधा घण्टे - यस समयमा, निद्रामा जबकि संग 2.00 3.00 गर्न सुत्न7घण्टा छ। तसर्थ, जो ओछ्यानमा 24 घण्टा पछि जाने ती मान्छे, शायद सुत्न र आराम गर्न सक्षम छन्।
अझै छ, र 7-8 घन्टा जो निद्रामा औसत अवधि। तर हामी मुख्य मापदण्ड आफ्नै तरिकाले-भइरहेको भूल हुँदैन। र अझै धेरै मानिसहरू आफ्नो दिनचर्या आयोजित सपना छैन 7-8 घण्टा र 3-4 घण्टा हुन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न खोजिरहेका छन्। त्यसैले, हामीलाई कम कसरी सुत्न र पर्याप्त निद्रा प्राप्त गर्न को प्रश्न फर्कन गरौं?4घण्टा सुत्न भनेर आधुनिक विज्ञान दावी सम्भव छ।
हामी पहिले देखि नै निद्रामा लामो 90 मिनेट मा, चरणहरु विभाजित छ भन्ने तथ्यलाई बारेमा कुरा गरेका छन्। यो चरण पूरा हुन्छ, व्यक्ति एक तत्काल मा सुतेको बेला, Awakening यस समय को सम्झनाहरु सुरक्षित बिना अप wakes। यो तपाईं एक चरण पूरा भएको छ जब एक समय मा एक मानिस उठाउनका भने, यो एक राम्रो निद्रामा र हार्दिक हुनेछ भन्ने निष्कर्षमा गर्न जान्छ। व्यक्ति बीचमा वा चरण को सुरुमा उठ्नु भने, मान्छे थकान र कमजोरी महसुस हुनेछ।
तर आफूलाई लागि गणना गर्न निद्रामा र उठ्दै, तपाईं धेरै परीक्षण गर्न आवश्यक हुनेछ। तथापि, तपाईं यसरी यस्तो अनिद्रा, उच्च रक्तचाप र अरूलाई रूपमा केही प्रभाव, विकास गर्न सक्छौं निद्रामा आफैलाई वंचित भने। र निष्कर्ष मा, म तपाईंलाई6घण्टा भन्दा बढी दिन सुत्न मौका छ भने, यो बेवास्ता छैन भनेर, गर्छन् आफ्नो शरीर जबरजस्ती गर्न केही आवश्यक छैन भन्नुहुन्छ।
निद्रामा विकार: कसरी सामना गर्ने?
मान्छे किन सुत्दा निद्रामा घुर्नु गर्छन्? कसरी सामना गर्ने?
को भ्रूण को पोज: फोटो। एक भ्रूण स्थिति निद्रामा
बच्चाको निद्रा, एक वयस्क कसरी पुनर्स्थापना?
एक बारी आधारित प्रविधी - एक चमकदार सपना कल गर्न कसरी
गर्मी मा सुत्न 8 तरिका
उपयोगी आंकडा Ris.Chem।
Kharkov बयलर 1942
इराक मा अमेरिकी सेना को चढाइ कारण। अमेरिकी सैन्य सञ्चालन को क्रनिकल, इराक मा घाटा
एक झिल्ली जूता के हो
परियोजना व्यवस्थापन प्रणाली JIRA Atlassian: समीक्षा, समीक्षा, analogues र विकल्प
Evpatoria कहाँ छ, भ्रमण ठाउँहरू जो शहर, प्राप्त गर्न कसरी
Avtoodeyalo इन्जिन "Avtoteplo": समीक्षा, फोटो
खुट्टा मा कर्न्स, घर मा उपचार